The Curse of Panglong | Just Another WordPress Blog
The Curse of Panglong
ပင်လုံ ၏ ကျိန်စာ
“သူတပါး၏လွတ်လပ်မှုကို အလေးမထားသူများသည် သူတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း လွတ်လပ်ရေး နှင့်မထိုက်တန် ပေဘူး။” – အာဘရာဟမ်လင်ကွန်း –
“Those who deny freedom to others, deserve it not for themselves…” – Abraham Lincoln – April 6, 1859 Letter to Henry Pierce et al
စာချုပ်များ ဖြင့် တည်ထောင်ထားသော ဥရောပ သမဂ္ဂ။
ခေတ်သစ် ကမ္ဘာတွင် တိုင်းနိုင်ငံများ၊ ပြည်ထောင်စုများ၊ သမ္မတ နိုင်ငံများကိုတည်ထောင်ရာတွင် လွတ်လပ်ရေး ကြေညာစာတမ်းများ၊ စစ်ပြေ ငြိမ်းရေး စာချုပ်များ၊ နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်များ ကို အခိုင်အမာ ရေးဆွဲကြပြီး ယင်း ကြေညာစာတမ်းများ စာချုပ်များ ကို အခြေခံပြီး ရေးဆွဲသည့် အခြေခံဥပဒေများ သည် တိုင်းပြည်များ၊ ပြည်ထောင်စု များ ထူထောင်ရန် အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်များ ဖြစ်လာ ကြရပါ သည်။ ဥပမာ၊ ခေတ်သစ် ဥရောပ သမဂ္ဂ ကိုထူထောင်ရာတွင် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၆ဝ) အတွင်း စာချုပ်ပေါင်း မြောက်မြားစွာ ကို အဆင့်ဆင့် သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး ထူထောင် ခဲ့ကြရပါသည်။ ပထမ ဦးဆုံး ထူထောင်ခဲ့စဉ်က နိုင်ငံ(၆) နိုင်ငံသာပါဝင်ခဲ့ သော်လည့်း ယနေ့အချိန်တွင် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံပေါင်း (၂ရ) နိုင်ငံရှိသွားပြီဖြစ်သည်။
ယင်းသို့် ကြီးမားသည့် နိုင်ငံပေါင်းစု ပြည်ထောင်စုကြီးတခု ဖြစ်ပေါ်လာရန်အတွက် Treaty of Paris (၁၉၅၁)၊ Treaty of Rome (၁၉၅၇)၊ Merger Treaty (၁၉၆၅) Single European Act (၁၉၈၆)၊ Treaty of Maastricht (၁၉၉၂)၊ Treaty of Amsterdam (၁၉၉၇)၊ Treaty of Nice (၂ဝဝ၁)၊ Treaty of Lisbon (၂ဝဝရ) စသည့် စာချုပ်များသည် ဥရောပသမဂ္ဂ ကို တည်ထောင်ရာတွင် အရေးပါသည့် သမိုင်းဝင်စာချုပ် အချို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းစာချုပ်များသည် ခိုင်မာသည့် ဥရောပ ပြည်ထောင်စု ထူထောင်ရန်အတွက် ဥရောပ သမဂ္ဂ ၏ အခြခံဥပဒေ ကို ရေးဆွဲရာတွင် အခြေခံ ရမည့် အချက်များဖြစ်လာရပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဥရောပ သမဂ္ဂ ၏ အခြေခံဥပဒေသည် ၄င်းစာချုပ်များ ကို တစုတပေါင်းတည်း ချုပ်ပေး လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ နောင် အသစ် ပူးပေါင်းလာ မည့် နိုင်ငံများကလည်း ၄င်း စာချုပ်များ နှင့် အတူ ဥရောပသမဂ္ဂ ၏ အခြေခံဥပဒေကို ဆက်လက် အတည်ပြု သွားကြခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် အခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲရာတွင် ပူးပေါင်းရေး စာချုပ်များတွင် ပါရှိသည့် သဘောတူညီချက်များ နှင့် အညီ ရေးဆွဲကြရခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ယင်းသဘောတူ စာချုပ်ထဲတွင် ပါသည့် အချက်များ နှင့် ဆန့်ကျင်ပြီးရေးဆွဲ၍ မရပေ။ ကနဦး ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ ဝင် နိုင်ငံ (၆) ခုမှ ယနေ့ (၂ရ) နိုင်ငံ အထိ တိုးပွား လာသည် ဆိုသည်မှာ ပူးပေါင်းရေး သဘော တူစာချုပ်များ တွင် ပါရှိသည့် ဘုံအကျိုးစီးပွားများကို လက်တွ့ကျကျ အကောင်အထည် ဖေါ် ဆောင် ခဲ့ကြပြီး မပါဝင်သေးသည့် အခြားသော ဥရောပ နိုင်ငံများ ပူးပေါင်း ပါဝင် လာချင် အောင် ပူးပေါင်း ပါဝင်လာ ခြင်းအားဖြင့် ရရှိလာမည့် အကျိုးစီးပွားများဖြင့်မက်လုံး ပေး ဆွဲဆောင် နိုင်ခဲ့ ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန် လွတ်လပ်ရေး ကြေညာ စာတမ်း နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ ၁ရရ၉ ဂျူလိုင်လ (၄) ရက်နေ့ တွင်ဗြိတိသျှကျွန်သဘောက်ဘဝမှလွတ်မြောက်လာသည့်အချိန်က ထုတ် ပြန် ခဲ့ သည့် လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းသည်လည်း ထိုနည်း တူပင်၊ ၁ရဂရ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁ရ) ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့သည့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ၏အခြေခံဥပဒေ ကို ရေးဆွဲရာတွင် တွင်သာမက မူလပထမ ပြည်နယ် (၁၃) ပြည်နယ် နှင့် စတင်ထူထောင်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု မှ ယနေ့ ပြည်နယ် ပေါင်း (၅ဝ) အထိဖြစ်လာ စေ ရန် အတွက် ပါ အထောက် အကူ ဖြစ်စေ ခဲ့သည့် အခြေခံ မူများ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ အပြင် ယင်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထဲတွင် အက္ခရာတင် ကဗျည်းထိုး ထည့်သွင်း ရေးသားခဲ့သည့် အခြေခံမူ များ သည် အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ် ကို အနိုင်တိုက်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အတွင်း ကျွန်စနစ်ကို အောင်မြင်စွာဖျက်သိမ်း ရန် သမ္မတ အာဘရဟမ် လင်ကွန်း အတွက် အောင်ပွဲကို ဆွတ်ခူးပေးမည့် လမ်းညွှန်များ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန် ပြည် ထောင်စု၏ လွတ်လပ်ရေးကြေညာ စာတမ်း တွင် ပါရှိသည့် “…. all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights,…. Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” (လူသားကို တန်းတူဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး၊ ဖန်ဆင်းရှင်က လူသားနှင့် ခွဲခွာ၍ မရသည့် အသက်ရှင်ခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်း၊ သုခချမ်းသာ ကိုရှာဖွေ ခွင့် အစရှိသည့် လူ့အခွင့်အရေးများ ပါဝင်သည့် ကောင်းချီး မင်္ဂလာအဖြာဖြာကို ပေးအပ်ခဲ့ သည်) ဆို သည့် စာပိုဒ် သည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြင့် ရေးသားသည့် နိုင်ငံရေးစာပေ လောက တွင် အကြိမ်ကြိမ် အကိုးကား ခံခဲ့ ရသည့် လူသိ အများဆုံး စာပိုဒ် တပိုဒ် ဖြစ် လာ ခဲ့ ပါသည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံသား များ၏လွတ်လပ်မှု သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏လွတ်လပ်ရေးကြေညာ စာတမ်းတွင်ပါသည့် “ လူသားကို ဘုရားသခင်က တန်းတူဖန်ဆင်းသည်” ဆိုသည့် အခြေခံမူ ပေါ်တွင် တည်ဆောက် ထား ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊အာဖရိကတိုက်မှအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်လာခဲ့သည့်လူမဲ များကိုကျွန်ပြုမှုသည် ယင်း အခြေခံမူကို တိုက်ရိုက်ကျကျ ချိုးဖေါက် ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ကြီး လင်ကွန်းက ပြောကြားပြီး ကျွန်စနစ် ဖျက်သိမ်းရေး အတွက် လမ်းညွှန်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့အ ပြင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ၏လွတ်လပ်ရေး ကြေညာ စာတမ်းမှ အ ခြားအချက် အလက်များသည် လူ့အခွင့် အရေး ဆိုင်ရာ အရေးကြီးသည့် အခြေခံတရား များလည်း ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ လွတ်လပ်ရေး ကြေညာ စာတမ်းသည် အမေရိကန် ပြည် ထောင် စု ၏အခြေခံဥပဒေ ကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရာတွင် အခြေခံရမည့် မူများ ဖြစ်သည့် အကြောင်း သမ္မတ လင်ကွန်း က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
စာချုပ်များကို ချုပ်ဆိုသည်ဆိုရာတွင် လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာမည်သို့သော စာချုပ် ပင်ဖြစ်စေကာမူ ချုပ်ဆိုရာတွင် ပါဝင် သဘောတူ လက်မှတ်ရေး ထိုးသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် (ဝါ) ပါဝင်ပတ်သက်သည့် အစုအဖွဲ့ အားလုံး သည် မိမိတို့ ၏တဦး တဖွဲ့ချင်းဆီရော၊ အားလုံး ၏ ဘုံအကျိုးစီးပွားများ ပါ ယေဘုယျ အားဖြင့် ပါဝင်ကြတာချည်း ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့ ၏ရေတိုရေရှည်အကျိုးစီးပွား ကိုထိခိုက် နစ်နာစေမည့် စာချုပ် မျိုး ကို (စစ်ရှုံး၍ အောက်စီင်္းမှ လက်မှတ် ရေးထိုးရသူမှအပ) မည်သူကမျှ လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆို လေ့မရှိပါ။
နိုင်ငံရေး နှင့် ပတ်သက်သည့် စာချုပ်များ ၏ သဘောသဘာဝ တွင် ပါဝင် လက်မှတ် ရေးထိုးသူ အစုအဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ တခုခုက စာချုပ်ပါ ကတိကဝတ်များ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ ကို ဖေါက်ဖျက်ပြီး တဖက်၏အကျိုးစီးပွားများနစ်နာလာခဲ့လျင် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ အောက်တွင် ဖြေရှင်းကြရပါသည်။ တို့အပြင် မိမိတို့ ရေးထိုး သဘောတူခဲ့သည့် စာချုပ်ပါ အချက် အလက်များကို သဘောမတူ တော့သည့် အချိန်တွင် (ဝါ) ကတိကဝတ် များ တာဝန် များ ကို မစောင့်ထိမ်းနိုင်၊ မထမ်းဆောင် နိုင် တော့ သည့် အချိန်တွင် ၊ စနစ်တကျ ပြန်လည် ပြုပြင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် စာချုပ် ကိုအပြီးအပိုင် ဖျက်သိမ်းပြီး စာချုပ်၏အနှောင် အဖွဲ့အောက်မှ အဖွဲ့ဝင် များ က တရားဝင် နှုတ်ထွက် ခြင်း ကိုပြုလုပ် ကြရပါသည်။
ပင်လုံ စာချုပ် နှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ သည် ဗြိတိသျှကျွန်သဘောက်ဘဝမှ လွတ်မြောက်လာလျင် သမိုင်းဘီး ကို နောက်ပြန်လှည့်ပြီး အတိတ် ခေတ် ဟောင်း က အသက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ်မျိုး၊ ပဒေသရာဇ် စနစ်မျိုး ကိုပြန်လည် ထူထောင်ရန် မဖြစ်နိုင် တော့ကြောင်း၊ ခေတ်မီတိုးတက်သည့် နိုင်ငံသစ် ကို ထူထောင် ရန်အတွက် တန်းတူ ရည်တူ ပြည်ထောင်စု မူ ကိုအခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံ ကိုသာ ထူထောင်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း အားလုံး နားလည် လက်ခံ သဘော တူခဲ့ကြပါသည်။ အင်ပါယာ နိုင်ငံများထူထောင်သည့်ခေတ်၊ ကိုလိုနီ နိုင်ငံများထူထောင်သည့်ခေတ်၊ အသက်ဦး ဆံပိုင် ဘုရင်မင်းမြတ်က မင်းနေပြည်တော် ကိုဗဟိုပြုပြီး တဦးတည်း အမိန့်ပေးအုပ်ချုပ်သည့် ခေတ်များ သည် လူ့သမိုင်းဖြစ်စဉ်တွင် တချိန်တခါ က ကမ္ဘာ့ ဒေသ အသီးသီးတွင် သူသူငါငါ အင်အား ကြီးလျင် ကြီးသလို ထူထောင် ခဲ့ကြသည့် ခေတ်များ ဖြစ်သော်လည့်း ယနေ့ခေတ်သစ် နှင့် လားလား မှ မအပ်စပ်တော့ သည့် ခေတ် များ စနစ် များ ဖြစ်သည်။ ခေတ်မီတိုးတက်သည့် နိုင်ငံ ကြီးတခုကို မဖြစ်မနေ တည်ဆောက်ကြရ တော့ မည်မို့ ယနေ့ ခေတ် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေး ရေစီးကြောင်း နှင့် အညီ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသစ် ကိုသာ ထူထောင်ကြရ မည် ကိုသဘောတူကြပြီး ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့က ပင်လုံတွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နှင့် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များ အတူတကွ ပင်လုံ စာချုပ် ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။
သို့သော်လည့်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကျဆုံး သွားခဲ့ သည့်နောက်ပိုင်းတွင် တင်းကြပ်သည့် ဗဟိုဦးစီးစနစ် ကိုကျင့်သုံးပြီး တမင်း တနိုင်ငံ စနစ် ကို အတင်းအဓမ္မ ပုံဖေါ်လာခဲ့ ကြ သည့်အထိ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည့် တိုင်အောင် ယနေ့အထိ ၄င်းစာချုပ်ပါအချက်အလက်များကို လက်မခံနိုင် တော့ပါ၊ ၄င်းစာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်များကို ဖျက်သိမ်းပါသည်၊ ၄င်းစာချုပ်ပါ ကတိကဝတ်များကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါပြီ ဆိုသည့် ကြေညာချက် မျိုး ကို စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည့် ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်း၊ ဗမာ မည်သူမည်ဝါ ကမျှ ယနေ့အထိ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခြင်း မပြုလုပ် ခဲ့ဘူးသေး ပါ။ ပင်လုံစာချုပ် ၏ကတိကဝတ် များကို တရားဝင် ပြန်လည် မရုတ်သိမ်း ခဲ့ကြသည့်အပြင် ကုန်လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၆ဝ) ကျော် ကာလ တွင် ဗမာ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများက ပင်လုံ ကတိကဝတ်များ ကိုပြန်လည်အကောင်အထည်ဖေါ်ကြရန် အကြိမ်ကြိမ် အလီလီ တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း၊ “ဒီမိုကရေစီအခြေခံတရားများ Vansangva Volume I စာမျက်နှာ ၁၄၇” တွင် “ပြည်ထောင်စုသားကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း” ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ် အောက် တွင် အကျယ်တဝင့်ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ <http://vansangva.com/vansangva-library/#7>
ကုန်လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် (၆ဝ) ကျော်သမိုင်းဖြတ်သန်းမှု တလျောက်လုံးတွင် ပင်လုံ တွင် ချမှတ်ခဲ့သည့် အခြေခံ တရားများ ကို ကနဦး ကျောခိုင်းခဲ့ ကြသည့် ဦးနုအစိုးရအပါအဝင် စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် က လည်း တခါဘူးမျှ ပင်လုံ စာချုပ်ကို တရားဝင် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဖျက်သိမ်း ခဲ့ခြင်း ရှိခဲ့ပါ။ ပင်လုံစာချုပ်၏အပိုဒ် (၇) တွင်ပါရှိသည့် “တောင်တန်းဒေသရှိပြည်သူတို့သည် ဒီမိုကရေစီ တိုင်းပြည် များတွင် အခြေခံများ အခွင့် အရေးများနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို ရရှိ ခံစားစေရမည်” ဆိုသည့် ကတိကဝတ်များ၊ ဝတ္တရားများကို ၄င်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းပိုင်ခွင့် အစရှိသည့် အခြား သဘော တူညီချက်များကို၎င်း ချိုးဖေါက်ပြီး တောင်တန်းဒေသများ၊ ပြည်နယ်များတွင် ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးများ ဆိတ်သုဉ်းစေခဲ့ သည့် အပြင် ဒီမိုကရေစီကို ပါ ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်ခဲ့ကြသည့် ဖဆပလ ခေတ်တွင် ၄င်း၊ ပြည်နယ်များ၊ တိုင်းများ တွင် ပါ ဗမာတိုင်းရင်းသားများ အတွက် ရော၊ တခြား တိုင်းရင်းသားများ အတွက်ပါ ဒီမိုကရေစီများ ဆိတ်သုဉ်းစေခဲ့သည့် မဆလ တပါတီ အာဏာရှင် ခေတ်တွင်ရော၊ တတိုင်းတပြည်လုံး လူမျိုး ပေါင်းစုံ ပြည်သူများ ထောင်နဲ့သောင်းနဲ့ သန်းနဲ့ချီပြီး ပြည်ပ နိုင်ငံများ ကို စီးပွားရေး ဒုက္ခသည်များ၊ နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်များ၊ စစ်ရေးဒုက္ခ သည်များ ဘဝ အဆင့် အထိ ကျဆင်းစေခဲ့ပြီး၊ ပြည်သူ တရပ်လုံး ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကိုပါ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့် အရင် နဝတ၊ နအဖ စစ်အစိုးရ ခေတ် ဆိုး စနစ်ဆိုး အပါအဝင် မည်သည့်ခေတ်တွင် မှ တက်လာသည့် အစိုးရများ က ပင်လုံမူနှင့်ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်နေသောမူများကို ကျင့်သုံးခဲ့ ကြသည့်တိုင်အောင် လက်တွေ့တွင် ပင်လုံ စာချုပ် ကို ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း တရားဝင် မဖျက်သိမ်းဝံ့ခဲ့ ကြပါ။ ယင်းအချက်တခုတည်း ကိုကြည့်လျင်ပင်၊ ပင်လုံစာချုပ်၏နက်ရှိုင်းမှု၊ လေးနက်မှု နှင့် နိုင်ငံရေး အရ တန်ဘိုးမြင့်မားမှု ကို သက်သေထူနိုင်ပါသည်။ အာဏာရှင်များ ကိုယ်တိုင် မထိပါး ဝံ့သည့် သိမ်မွေ့ လျှိ့ဝှက်ချက် များ ရှိနေသည် မှာ သေခြာလှပါသည်။ ဦးနေဝင်း ၏ မဆလ ခေတ်တွင် လည်း ပင်လုံစာချုပ်ကို အထိရောက်ဆုံး ချိုးဖေါက်ခဲ့ သည့်တိုင်အောင်၊ ပင်လုံ စာချုပ်၏ဘယ် အချက်၊ ဘယ်အပိုဒ်များသည်ဖြင့် ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့ဝင် ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်ဒေသ ၏ အကျိုးစီးပွား ကို ဆန့်ကျင်သည်၊ ထိခိုက်နစ်နာစေသည် ဟူ၍ ခိုင်ခိုင် မာမာ ထောက်ပြ ပြောဆိုနိုင် ခြင်းမရှိသည့်အပြင်၊ ပင်လုံ စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များကို အများပြည်သူ သိအောင်ဖေါ်ထုတ်ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဦးဆောင် ဦးရွက်လုပ်ပြီး ပညာပေးခြင်းမျိုး လည်း မပြု လုပ်ခဲ့ဘူး ပေ။ တကြိမ်တည်းတွင် အုပ်စိုးသူ အစိုးရ အဆက်ဆက်က ပင်လုံစိတ်ဓာတ်၊ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ် ဆိုသည့် စကားများ ဖေါင်လောက် အောင် ပြောခဲ့ ကြပြန်သည်။ အထူး သဖြင့် မဆလ ခေတ်တလျောက်လုံး တွင် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံညီညွတ်ရေး တို့အရေး စသည့်ကြွေးကြော်သံ များ သည် အကျယ်လောင်ဆုံး အော်ဟစ် ခဲ့ကြရပါသည်။ ပြည်ထောင်စု နေ့များကိုလည်း ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကျင်းပခဲ့ကြရသည့်အပြင် နာမည်ကြီး အားကစား သမား များ က ပြည်ထောင်စုအလံ ကို တမြို့ပြီး တမြို့ ပြေးလွှား ကိုင်ဆောင်ပြီး ပြည်ထောင်စုနေ့ကျင်းပမည့် နေရာ သစ်ဆီကို အရောက် လက်ဆင့် ကမ်း သယ်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်။ သူတို့သည် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ နှင့် အတူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် ပင်လုံ သဘောတူညီမှုများကို အလေး ထားပါသည်၊ ပင်လုံကိုမဆန့်ကျင်ပါ၊ ပြည်ထောင်စု ကြီး မပြိုကွဲရန်ကို မဆလ စစ် အစိုးရက လုပ်ဆောင်နေပါသည် ဆိုသည့်သဘောကို တိုင်းပြည်၏ဘဏ္ဍာတော်ငွေ များသောက် သောက်လဲ သုံး ပြီး ဝါဒဖြန့်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းသို့ မိမိတို့ မယုံကြည်မလိုလားသည့် ပင်လုံ၏ အနှစ် သာရ များကို ယုံကြည်သယောင် ပုံရိပ် ယောင် တခုကို လိမ်ညာဖန်တီးရန် အတွက် အလွန်အကျွံ ဝါဒ ဖြန့်နေရသည့် ကာလတွင်ပင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ တဖွဲ့ပြီး တဖွဲ့ တောခို သွားခဲ့ကြပြီး လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး မဆင်နွှဲသည့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးဟူ၍ တိုင်းပြည်တွင် လူမျိုးတမျိုး တလေမှ မကျန်တော့ သည့်အပြင် ဖဆပလခေတ်က ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု ကိုယ်တိုင် လက်နက် စွဲကိုင် ပြီး တောခိုခဲ့ရသည့် အထိ ဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။ မဆလ စစ်အစိုးရက ဝါဒဖြန့် နေသည်ကတမျိုး၊ လက်တွေ့ တိုင်းပြည်တွင် ဖြစ်ပျက်နေသည် ကတမျိုး၊ အများ ပြည်သူခံစားနေရသည်က တခြားဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။
ပင်လုံ ၏ ကျိန်စာ။
တပ်မတော်က ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် အာဏာသိမ်းအပြီး ဖက်ဒရယ် (ပြည်ထောင်စုစနစ်) ကိုထူထောင်ရန်ကြိုးပမ်းလာကြသဖြင့် ပြည်ထောင်စု ကြီး ပြိုကွဲ တော့မှာမို့ အာဏာသိမ်းခဲ့ရပါသည် ဟူ၍ ကြေညာလိုက် သည့် အချိန်ကစ ပြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည် အပြောတမျိုး အလုပ်တမျိုး၊ ကြားနေရဖတ် နေရာတာကတခု၊ လက်တွေ့ဖြစ်ပျက် နေသည်က တခြားဆိုသည့် ဝိရောဓိ၊ ဆန့်ကျင်ဖက် ကမ္ဘာ နှစ်ခုကြားတွင် အသက်ရှင်လှုပ်ရှား ရသည့် ခေတ် (paradoxical era) တခု ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရပါသည်။ ပြည်ထောင်စု ကြီးပြိုကွဲမည်ကို ကြောက်ရပါသည်ဟူ၍ တမျိုးဝါဒဖြန့်ပြီး၊ ပြည်ထောင်စုကြီး မပြိုကွဲအောင် ခိုင်မာစည်းလုံးသည့် ပြည်ထောင်စု ကြီးကိုတည်ဆောက်ရန် စစ်မှန်သည့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကို ပင်လုံမူအတိုင်း ထူထောင်ရမှာ ကို ကြောက်ပြန်သည် ဆိုတော့ ပြည်သူများ တွင် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဆိုသည့် ဝေါဟာရ နှင့် ပတ်သက်လာလျင် ဇဝေဇဝါ ဖြစ်စေသည့် ခေတ် ပင်ဖြစ်ပါသည်။ “တိုင်းပြည်ချောက် ထဲမကျခင် တလက်မ အလိုတွင် ကယ်တင်လိုက်ရပါသည်“ ဟူ၍ ကြေညာခဲ့သည့် အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရ ၏ လက်ထက်တွင်ပင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသည် LDC ခေါ် ကမ္ဘာတွင် “ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံ“ ဆိုသည့် အသူတရာ ချောက်နက် ကြီးထဲသို့ ကျဆင်း ခဲ့ရပါသည်။ ပြည်ထောင်စုကြီး ခိုင်မာလာသည် ကို မတွေ့ရပဲ အက်ကြောင်းများသာ အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ပေါ်လာ ခဲ့သည်။ ပင်လုံ ကို အပုပ် မချရဲသော်လည့်း၊ ပင်လုံ စာချုပ်နဲ့ အညီ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ရန် မလိုလား ပြန်ဆိုသည့် ဒွိဟများ၊ ဝိရောဓိများနဲ့ ရောပွမ်းသည့် သမိုင်းဖြစ်စဉ် တခုကိုဖြတ်သန်းခဲ့ကြရပါသည်။ အဆင့် မြင့်သော ပင်လုံ အတွေးအခေါ် နှင့် ပြတ်သားရှင်းလင်းသည့် နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှု ကို မပေးနိုင်ခဲ့သည့် အတွက် တိုင်းပြည်တွင် နိုင်ငံရေး ဆင်ခြင် တုံတရား များ အခေါင်းပါးဆုံး အနိမ့်ကျဆုံး ကာလ တခု ကို ဖြတ်သန်းခဲကြရသည်။ စစ်အာဏာရှင် တို့မှာ ပင်လုံကို လည်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်း အပုတ်မချရဲ၊ ပင်လုံလမ်းစဉ် အတိုင်းဆက်လက်လျောက်လှမ်းနေသယောင် ပြည်သူတို့ကိုလိမ်ညာကြရသည့် ဒုက္ခ၊ ဝိရောဓိ များဖြင့် အကျပ်တွေ့ကာ ပင်လုံ ၏ကျိမ်စာ ကိုခံကြရသည့်အလားပင်ဖြစ်သည်။
ပြည်သူလူထုအတွင်းတွင်လည်း ပင်လုံ ပြည်ထောင်စုကို ပြိုကွဲအောင်လုပ်နေတာ က မဆလစစ်အစိုးရလား၊ “အဖျက်သမားများ” “ခွဲထွက်ရေး သမားများ” ဟူ၍ မဆလ က ကင်ပွန်း တတ် ထားသည့်လူများလား ဆိုသည့် အယူအဆများ အမြင်များ ရှုပ်ထွေးစေခဲ့ပါသည်။ ယင်း ခေတ်ကာလတွင် မှောင်ခို အမြစ်ပြုတ်ရေး ဆိုသည်မှာ သတင်းစာများ တွင် နေ့စဉ်ဖတ်ခဲ့ကြရသော်လည့်း၊ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ထောင်ဂဏန်း မက ရှိသည့် မှောင်ခို ကစ္စည်းများသည် တောလမ်း များကိုဖြတ်ပြီးတမျိုး၊ နယ်စပ် မြို့များ မှတဆင့် ကားများနှင့် ပြောင်တိုက်ပြီးတဖုံ၊ ပတ်ပတ်လည် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံအားလုံးမှ တနေ့တနေ့ ကျပ်ပေါင်း သိန်းသန်း ကုဋေချီ တန်ဘိုးရှိသည့် မှောင်ခို ပစ္စည်းများ ဒလဟော စီးဝင်နေပြီး မှောင်ခိုတိုက်ဖျက်ရေး အော်နေသည့် အရာရှိကြီးများ၏တကိုယ်လုံးတွင် လည်း အထက်မှ အောက် အထိ လက်ပတ် နာရီ၊ အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီ၊ လုံချည်၊ ညှပ်ဖိနပ်၊ လွယ်အိတ်၊ ဘောပင် က အစ အားလုံးလိုလို မှောင်ခို ပစ္စည်းများချည်း ဖြစ်နေသည် မို့ ဆန့်ကျင်ဖက် များ၊ ဝိရောဓိ များနှင့် ပြည့်နေ သည့်ကာလပင်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် ခိုင်မာသည့် စီးပွားရေးမူဝါဒမရှိ သည့်အတွက် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများ၏စီးပွားရေး များက နေ့စဉ် နဲ့ အမျှ ကျူးကျော် ဝင်ရောက်နေသည့် ကာလဖြစ်သည်။ မိမိ တို့ နိုင်ငံ ၏ စီးပွားရေး အချုပ်အခြာအာဏာ အားအင်ချိနဲ့ခဲ့ရသည်။ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးမှုများကလည်း အစည်းပြေ ခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးအချုပ်အခြာအာဏာပါ ရော့ရဲ လာစေသည့် ခေတ်ဖြစ်ပါသည်။ မှောင်ခိုလည်း အမြစ် မပြုတ်ခဲ့ပါ။ “သောင်းကျန်းသူ“ လည်းအမြစ်မပြုတ်ခဲ့ပါ။ ဗမာ့ တပ်မတော်အင်အားသာ တောင့်တင်းလာပါသည်၊ တိုင်းပြည်၏ အင်အားမကြီးခဲ့ပါ။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး အဖက်ဖက်တွင် အင်အားများချိနဲ့ ခဲ့ရသည်။
ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲမှာကိုကြောက်လို့ အာဏာသိမ်းရသည်၊ ဖက်ဒရယ် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စု၊ ပြည် ထောင်စု ကိုချစ်လို့ အာဏာ သိမ်း ရသည်၊ သို့သော်လည့်း ဖက်ဒရယ်ကိုလည်း လက်မခံပြန်၊ ပြည်ထောင်စု ဆိုသည့်စကားလုံးကိုတော့ တွင်တွင်ပြောပြန်သည်။ နိုင်ငံရေး ကိုတွေးခေါ်ရာတွင် ယုတ္တိဗေဒ၏စည်းမျဉ်းဥပဒေသ ကင်းမဲ့ကာ ငါ့စကားနွားရသဘောမျိုး ပေါက်ပေါက်ရှာရှာပြော၊ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာလုပ်ကြသော ဗမာစစ် အာဏာရှင် တို့၏ ခေတ်ဖြစ်ပေသည်။ ပင်လုံကိုတော့ မပွင့်တပွင့် ရှုံ့ချကြသည်။ ပြောင်ပြောင် တင်းတင်းရှုံ ချပြန်လျင်လည်း ပင်လုံဆို သည်မှာ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကို တည် ဆောက်ရန် ဖြစ် လာ သည် ဆိုသည့် အမှန်တရားများ ဘူး ပေါ်သလို ပေါ် လာမည်ကိုဆိုးရသေးသည်။ ပြည်ထောင်စု ကိုထိမ်းသိမ်းသူ၊ ပင်လုံ စိတ်ဓာတ်ကိုကိုင်စွဲ ထားသူ၊ (တနည်းအားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကို မဆန့်ကျင်သူ) ဆိုသည့် ပုံရိပ်ကို ပြည်သူများ ကြားတွင် ငွေအကုန်ခံ၊ အာပေါက်ခံပြီး ဝါဒဖြန့်ရတာကလည်း အလုပ်ကြီးတခု၊ မဆလခေတ် အုပ်စိုးသူများ ၏ ဝိရောဓိ နှင့် အမှန်တရားကို ငွေကုန်ခံ၊ အာပေါက်ခံပြီးဖုံးကွယ်ရသည့် ဒုက္ခကလည်း ကြီးမား လှပါပေသည်။ အမှန် တကယ် ကိုယ် တည်ထောင်နေတာက တင်းကြပ်သည့် တမင်းတနိုင်ငံ တပြည်ထောင် ဗဟို ဦးစီး စနစ်၊ ပြောတော့ ပြည် ထောင်စု။
ရှေးဟောင်း ပဒေသရာဇ် ခေတ်က အသက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်မင်းမြတ် ၏အာဏာ မျိုးကို ရယူထားသယောင် အနေအထားမျိုး၊ မဆလ ခေတ် မင်းရူး၊ ဘုရင်ရူး အာဏာရှင် အုပ်စိုးသူများ သည် သူတို့၏ ပစ္စုပ္ပန် ကာလ သည် အတိတ်တချိန်က ရောက်ခဲ့ဘူးသယောင်၊ ကြုံများခဲ့ဘူး သ ယောင် ထင်ယောင် ထင်မှား ဖြစ်နေသည့် déjà vu အနေအထားမျိုး၊ ပြည်သူများချစ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို တဖက်က အမွှန်းတင်၊ တကြိမ်ထည်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်အေင်ဆန်း ၏ပင်လုံမူ နဲ့ လုံးဝ ဥသုံ ဆန့်ကျင်သည့်လမ်းကိုလိုက် ဆိုတာမျိုး၊ ထူးထွေဆန်းပြားသည့် စိတ်ကူးများနှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်လုပ်ရပ်များဖြင့် စိတ္တဇဆန်သည့် ခေတ်တခုကို ဖန်တီး ဖြတ်သန်းခဲ့ ကြသည်။
ပင်လုံစာချုပ်၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်
လူ့အခွင့်အရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းပိုင်ခွင့်တို့ဟူသည်မှာ တစုံတဦးတယောက်ကပေးအပ်မှ ရရှိနိုင် သည့်အရာမျိုးမဟုတ်ပါ။ ဘယ်သူကမှ အခွင့်ထူး တခုလို၊ အထူးဆုပေးသလို ပေးစရာ မလိုပဲ လူသားမှန်လျင် လူမျိုးတမျိုးမှန်လျင် မွေးရာပါရှိပြီးသားအခွင့်အရေးများသာ ဖြစ်ကြပါသည်။ သဘာဝအရ မွေးရာပါရရှိသည့် လူ့အခွင့်အရေး (ဝါ) လူတိုင်းမရ မဖြစ် ရကို ရရမည့် အခွင့်အရေး (Rights) သာလျင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါကမှ ရော့အင့် ဆိုကာ အ ပေါ် မှ ချပေး၍ သည့် ကိစ္စမျိုး (grant) မဟုတ်ပါ။ စာချုပ်အရဖြစ်စေ အခြေခံဥပဒေထဲတွင်ဖြစ်စေ ၄င်း Rights များကို ကဗျည်း အက္ခာရာတင်သည့် အခါတွင် လည်း ၄င်းအခွင့်အရေးများသည် စေတနာ နဲ့ “ပေးအပ်” လာသည့် အခွင့်အရေးမျိုးမဟုတ်ပဲ နဂို လူတိုင်းမရမဖြစ် ရကိုရရမည့် အခွင့်အရေးကို အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုလိုက် ကြသည့်သဘောသာ ဖြစ် ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများ၊ လူ့အခွင့်အရေးများ၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်ဆို သည် တို့မှာ ပေးအပ်သူ နှင့် လက်ဝေခံ ရရှိသူ ဟူ၍ ကျေးဇူးရှင်နဲ့ကျေးဇူးခံ ကျေးဇူးစားဆိုတာမျိုး မရှိပါ။ စာချုပ်အရ ဖြစ်စေ အခြေခံဥပဒေ နှင့် ပြဌာန်းပြီးဖြစ်စေ ယင်းနဂိုရှိရင်းစွဲအခွင့်အရေးများကို သက်ဆိုင် သူ အားလုံးက သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုး လိုက်ကြ သည့်အခါတွင်၎င်း၊ အခြေခံဥပဒေ အားဖြင့် ပြဌာန်းသည့်အချိန်တွင်၎င်း သက်ဆိုင် သူ အသီး သီး သည် တူညီသည့် ဘုံ အကျိုး စီးပွား အတွက် သဘောတူ လိ်ုက်ကြတာသာ ဖြစ် ပါသည်။ ပင်လုံကို ဥပမာအားဖြင့်ပြောရရင် ပင်လုံ စာချုပ်ကို သ ဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးလိုက်ကြသည့်ကိစ္စမျိုးတွင် လက်မှတ် ရေးထိ်ုး သူ ဘယ်အစု အဖွဲ့ကဖြင့် နစ်နာ ဆုံးရှုံးသွားသည်၊ ဘယ်အစုအဖွဲ့ကဖြင့် ပေးလိုက်ရသည်၊ ဘယ်အဖွဲ့ကဖြင့် အမြတ်ထွက်သွားပြီး၊ ဘယ်အစုအဖွဲ့ (partner) က တော့ဖြင့် အနစ်နာခံလိုက်ရသည်၊ ဆုံးရှုံးသွား သည်ဆို သည်မျိုးမရှိပဲ၊ ပင်လုံ စာချုပ် ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသူ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ဗမာ အားလုံးတို့သည် အကျိုးတူ ပူပေါင်းခြင်း၊ တဦး၏နဂိုရှိရင်းစွဲကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် အစရှိသည့် Rights များကို အပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုပြီး ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသစ် တခုကို အတူတကွ ထူထောင်ကြမည်ဟု ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ ကြခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်နယ် ဖြစ်လာသည့် ဒေသများ ကလည်း ပင်လုံစာချုပ် ရှိခဲ့၍၊ ပင်လုံပူးပေါင်းရေးမူ နှင့် အတူပါရှိသည့် တန်ဘိုး များကိုယုံကြည်၍ ပင်လုံကို ဆက်လက် အတည်ပြု သွားသည့် သဘောပင်ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ပင်လုံစာချုပ်ကို အားလုံး၏ ဘုံအကျိုးကျေးဇူးကိုရှေ့ရှုပြီးရေးထိုးလိုက်ကြသည့်အတွက် ချက်ခြင်း လက်ငင်းခံစားကြရသည့် ဘုံအကျိုးကျေးဇူး မှာ ဗြိတိသျှကျွန်သဘောက်ဘဝကနေ အတူတကွ လွတ်မြောက်ကြပြီး ချင်း၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ကယား၊ အားလုံး အတူတကွ လိုလားတောင့်တကြပြီး အသက်များပေးဆပ် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြရသည့် လွတ်လပ်ရေးကို ချက်ချင်း လက်ငင်း ရရှိလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရေရှည် ရရှိခံစားရ မည့် ဘုံအကျိုးစီးပွားအနေနဲ့ကတော့ ပင်လုံစာချုပ်တွင်ပါရှိသည့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများ၊ ပူးပေါင်းရေးမူများသည် ဥရောပသမဂ္ဂလို၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တို့လို ကြီးကျယ်ခန်းနားသည့် ပြည်ထောင်စုကြီးတခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်း တခုကို ရရှိလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်မီ တိုး တက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာသည့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံကို ထူထောင်ရန်အတွက် ဥရောပသမဂ္ဂ တို့၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တို့ ထက်မနိမ့်ကျသည့် လူ့အခွင့်အရေးများ၊ ဒီမိုကရေစီ၏အုတ်မြစ်များ၊ ပြည်ထောင်စုမူများ၊ ပူးပေါင်းရေးမူများကို ပင်လုံတွင်ပနှက်ချထားခဲ့ပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။ ဝေးလံသည့် အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများ မှ တိုက်ရိုက်ကူးယူစရာမလိုပဲ၊ မိမိတို့ နိုင်ငံ၏သမိုင်းနောက်ခံ၊ ရေခံမြေခံ နှင့် ကိုက်ညီပြီး တကြိမ်ထည်းတွင် ကမ္ဘာ့အဆင့်ကိုပါမီ သည့် မူများ၊ သဘောတရားများကို နိုင်ငံ့ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်း ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီး ပင်လုံတွင် အုတ်မြစ်ချခဲ့ ပြီးသားဖြစ်ပါသည်။
တန်းတူရည်တူ ရေးထိုးကြသည့် သဘောတူစာချုပ်အရဖြစ်စေ၊ အခြေခံဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ ပြည်သူများရွေးကောက်သည့် တရားဝင် နိုင်ငံတော် အစိုးရ တရပ်ရပ်ကဖြစ်စေ တစုံတခု သော ဒေသတခုခု (ဝါ) လူမျိုးတမျိုးမျိုးကို ထူးခြားသည့် အကြောင်းပြချက် တစုံတခုနဲ့ အခွင့် ထူး (privilege) တစုံတရာကို ပေးအပ် ကောင်းပေးအပ် နိုင်သော်လည့်း လူမျိုးတမျိုး၏နဂိုရှိရင်းစွဲ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းပိုင်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့် ဆိုသည့် အမျိုးသား အခွင့်အရေး (Rights) များသည်ပေးအပ်၍ ရလာခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ ဘိုးဘင်ဘောင်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့သည့် အမွေအနစ်များ (inherent) ဖြစ်သည်၊ ယင်း ဘိုးဘွား ပိုင်အမွေအနစ်ဖြစ်သည့် အခွင့်အရေး (inherent Rights) မျိုးသည် ယင်းလူမျိုးနဲ့ ဘယ်သောအခါမှ ခွဲခွာလို့ မရစကောင်းသည့် အခွင့်အရေးများ (inalieanable Rights) ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့ လူမျိုးအသီးသီး ၏ သူတို့နှင့် ခွဲခွာ၍ မရစကောင်း သော ဘိုးဘွားပိုင်နယ်မြေ (inherent territories) များ၊ သူတို့နှင့် ခွဲခွာ၍ မရစကောင်း သော သူတို့၏ ဘိုးဘွားပိုင် အမွေအနစ်များဖြစ်သည့် အခွင့် အရေးများ (inherent inalienable Rights) သည် ကမ္ဘာ့ လူမျိုး အသီးသီး ၏ တည်ရှိ ရှင်သန်မှုအတွက် မရှိမဖြစ် ပိုင်ဆိုင်ကြသည့် အမွေအနစ်များပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ သူတို့နှင့် ခွဲခွာ၍ မရ စကောင်းသည့် လူမျိုးအသီးသီး ၏ အသက် ဝိဉာဉ် ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည့် အမွေအနစ် များကို ပြင်ပမှ အင်အားသုံးပြီး မလုပ်ကောင်း၊ မလုပ်အပ်၊ မလုပ်သင့် ပေ။ သူတို့နဲ့ ခွဲခွာရန် အားထုတ် လုပ်ဆောင်လာ သည့် အခါ တိုင်း ကမ္ဘာကြီး တွင် စစ်မီးများ ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်ခဲ့တာချည်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ Universal Truth ခေါ့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမှန် တရား ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးဆုံးသွားသည့်အခါတွင် ယင်း Universal Truth ခေါ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမှန်တရားများကို သိမြင်လာကြပြီး ယင်း အမြင်သစ် အတွေးသစ်များ၊ သဘောတရား၊ အယူအဆ အသစ် များသည် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများ ကြားတွင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း စတင်အမြစ်တွယ်ခဲ့သည့် အလျောက်၊ ကိုလိုနီစနစ်ဖျက်သိမ်းရေး၊ ကမ္ဘာ့လူမျိုးအသီးသီးတို့ နဂိုမူလပိုင်ဆိုင်ကြသည့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် များ ပြန်လည်ရရှိရေး များကို ဆောင်ရွက်ရင်း ငြိမ်းချမ်းသည့် ကမ္ဘာကို တည်ဆောက်ရေးစ သည်တို့ကို အသစ် ပေါ်ထွန်းလာသည့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂက ကမကထ ပြုပြီုး တစိုက် မတ်မတ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည့်အပြင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း ကြီးကိုပါ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁ဝ) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် နိုင်ခဲ့ ပါသည်။ ယင်း ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင်ပင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမှန်တရားများကို အခြေခံပြီး ခေတ်နဲ့တပြေးညီဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသစ်ကို စတင် ထူထောင်နိုင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လူမျိုး တမျိုးနဲ့တမျိုး နိုင့်ထက်စီးနင်း ပြုကျင့်သည့် ဝါဒ များသည် ခေတ်မမှီတော့ကြောင်း၊ ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်းယင်းဝါဒ၊ ယင်း စနစ်များကို အပြီးအပိုင် ဖျက်သိမ်း ကြရ မည် ဆိုသည့် သဘော တရားများသည် ကမ္ဘာ့လူသားများကြားတွင် ရှင်သန်လာသည့်အလျောက် လူသား စိတ်ဓာတ်ရှိပြီး၊ လူသားပီသသည့် ပြည်ထောင်စု ၏ဖခင်များက ပင်လုံတွင် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး များကို ပြဌာန်းပြီး ရာသက်ပန်ငြိမ်းချမ်းသည့် ပြည်ထောင်စုကြီး အတွက် ပင်လုံတွင် အုတ်မြစ်ချ ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့သောအယူအဆအသစ်များ သည် ကမ္ဘာစစ်ကြီး (၂) ကြိမ် တိတိ လောင်ကြွမ်းခဲ့ရာမှ လူသားတို့ တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသော အသိတရားများဖြစ်သည်။ ကုန်လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၆ဝ) ကျော် ကာလ အတွင်းတွင် ပင်လုံ ၏ လေးနက်ပြီး မြင့်မား သည့် မူဝါဒများ၊ ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာအမှန်တရားများကို ကျောခိုင်းခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ အမှန်တရား ကို မြတ်နိုး သည့် ခေါင်းဆောင် ကောင်းများ မပေါ်ပေါက် လာပါက ပင်လုံ၏ ကျိန်စာကို တပြည်လုံးဆက်လက်ခံကြရဦးမည်ဖြစ်သည်။
သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝ ပြီး၊ သယံဇာတတို့ကို အလွန်အကျွံထုတ်ရောင်းသောနိုင်ငံများသည် သယံဇာတ၏ကျိန်စာကို ခံကြရသည်ဟုဆိုပါသည်။ တိုင်းပြည်တခုတွင် သယံဇာတ ပေါကြွယ် ခြင်း သည် ယေဘုယျအားဖြင့် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေတိုးကာ ပြည်သူတို့၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားရေးအတွက် အကြောင်းတခု ဖြစ်သော်လည်း ကိုယ်ကျိုးရှာအကျင့်ပျက် အဂတိလိုက်စား သည့် အုပ်စိုးသူတို့ မှ အာဏာကို လက်ဝါးကြီးအုပ်မှု ကြောင့် ပြည်သူတို့သည် သယံဇာတ ၏ကျိန်စာကိုခံကြရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင် Universal Truth ခေါ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမှန်တရားများနှင့်ပြီးပြည့်စုံသည့် ပင်လုံကို အခြေခံ သည့် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ဖေါ်ဆောင်ရန် ကတိကဝတ်များ အခွင့်အလမ်းများရှိခဲ့ပါလျက်နှင့် အုပ်စိုးသူအဆက်ဆက်မှ တိုင်းပြည် အာဏာကို လက်ဝါး ကြီးအုပ်ကာ ပင်လုံကတိကဝတ်တို့ကို ဖေါက်ဖျက်ခဲ့ကြသည်။ အမှန်တရား ကိုကျောခိုင်းခဲ့ ကြသည်။ ကတိမတည်လျင်၊ သစ္စာဖောက်လျင် ကျမ်းစူး တတ်သည်၊ ကျိန်စာ သင့်သလို ခံရတတ်သည် ဟူသော ဗမာ့ဆိုရိုးစကား နှင့် မိရိုးဖလာယုံကြည်မှု ရှိပါသည်။ ဗမာအပါအဝင်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတို့အတွက် ထာဝရ သာယာ ငြိမ်းချမ်း သော ပြည်ထောင်စု ကြီးကို မျက်မောက်ပြုရစေမည့် ပင်လုံ ကတိကဝတ်တို့ကိုဖေါက်ဖျက်ခဲ့ကြပြီဖြစ်သဖြင့် ပင်လုံ၏ကျိန်စာသင့်ခဲ့ ကြရပြီး အုပ်စိုးသူရော၊ ပြည်သူများ ပါ တတိုင်း တပြည်လုံး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အဘက်ဘက်တွင် အထီးကျန်ဖြစ်ခဲ့ကြရပြီး အကြပ်အတည်း အခက်အခဲ မျိုးစုံ ကို လည်း ယနေ့အထိ ကြုံ တွေ့ ရင်ဆိုင် ခံစားနေရဆဲ ဖြစ် သည်။
ပင်လုံ၏ ကျိမ်စာ တဇာတ် သိမ်းရေး၊ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေး
၁၈၆၁ နဲ့ ၁၈၆၅ အတွင်း (၄) နှစ်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်သည် စက်မှုတော်လှန်ရေး ၏အသီးအပွင့်များ နှင့် အတူ မြို့ပြအခြေပြု စက်မှုလူ့အဖွဲ့အစည်း အသွင်ကို ကူးပြောင်းနေသည့် အလျောက် ကျွန် စနစ်ကိုပါလက်မခံ တော့သည့်၊ အမေရိကန် မြောက် ပိုင်း ပြည်နယ်များနှင့်၊ မိမိတို့၏စီးပွားရေးမောင်းနှင်အားအဖြစ် ဝါဂွမ်း စိုက်ခင်းများတွင် ကျေးကျွန်များကို အဓမ္မစေခိုင်းနေရဆဲ ဖြစ်ပြီး၊ ကျေးလက် အခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ခေတ်နောက်ကျ ကျန်ရစ်နေသေးသည့် တောင်ပိုင်း အမေရိကန်ပြည်နယ်များအကြား ကျွန်စနစ် ဖျက်သိမ်းရေး၊ မဖျက်သိမ်းရေး ကိုအခြေခံပြီး တောက်လောင်ခဲ့သည့် ပြည်တွင်းစစ်မီး ဖြစ်သည်။ မတူညီသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ရပ်၊ မတူညီသည့်ခေတ် နှစ်ခေတ် နှင့် မတူညီသည့် တန်ဖိုးထားမှု များအပေါ်တွင် အခြေခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် စက်မှုထွန်းကားပြီး ခေတ်ရှေ့ကိုပြေးနေသည့် အမေရိကန် မြောက်ပိုင်းက စိုက်ပျိုးမှု တော်လှန်ရေး ထဲတွင် ခေတ်နောက်ကျကျန် နေခဲ့သည့် အမေရိကန်တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များ အပေါ် အနိုင်ရ ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်စနစ် ကို အပြီး အပိုင် ဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းရန် အတွက် (၄) နှစ်ကြာ ပြည်တွင်းစစ်တွင် နှစ်ဖက်ပေါင်း လူ (ရ) သိန်းကျော်သေခဲ့ရပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ၏သမိုင်းတလျောက်တွင် လူ့အသက်ဆုံးရှုံးမှု အများဆုံးစစ်ပွဲဖြစ်သည်။ တောင်ပိုင်း ပြည်နယ်များက သီးခြား ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း ထူထောင်ပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှခွဲထွက်ရန် အထိလုပ်လာသည့် အချိန်တွင် သမ္မတ လင် ကွန်း က ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွင် ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးကို အဓိကထား ကြွေးကျော်ခဲ့ သော်လည့်း၊ ကျွန်စနစ်ကိုတော့ ပြည်တွင်းစစ် မဖြစ် လျင် ပင် သူ့အလိုလို ခေတ်နဲ့အညီပျောက်ကွယ်သွားမည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းစစ်အပြီးတွင် ကျွန်စနစ်ကို ဥပဒေပြဌာန်းပြီး ဖျက် သိမ်း ခဲ့ ပါသည်။
ကျွန်ပ်တို့နိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ရခြင်း ကြောင်းရင်းအဖြစ် နယ်ချဲ့သွေးထိုးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီး ယိုးမယ်ဖွဲ့ရေးသားပြောဆိုခဲ့ကြ သည်။ ကိုလိုနီ ခေတ်တွင် နယ်ချဲ့၏သွေးထိုးမှုများ အမှန် ရှိခဲ့ သော်ငြားလည်း၊ ၁၉၄ရ ခုနှစ်ပင်လုံစာချုပ်အားဖြင့် ယင်းသွေးထိုးမှု တို့ကို တဇာတ် သိမ်းခဲ့ ပြီး ဖြစ်သည်။ ယနေ့ အချိန်အခါတွင် ရှည်ကြာလာသောပြည်တွင်းစစ် သမိုင်းကို မတူညီသော ကမ္ဘာ့အမြင် နှစ်ရပ်၏ ပဋိပက္ခ အဖြစ်သုံးသပ် ၍ရ ပေ လိမ့်မည်။ တိုင်းရင်း သားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးများကို ချိုးနှိမ်နှပ်ကွပ်ထားနိုင်မှ တိုင်းပြည်စည်းလုံးမည်၊ တိုးတက်မည်ဟု ယုံကြည်သည့် ဖေါက်ပြန် လွန်း သော ရှေးခေတ် ဟောင်း ကမ္ဘာ့အမြင် နှင့် ခေတ်ရှေ့ကိုပြေးနေသော တန်းတူရည်တူ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု မူကိုကိုင်စွဲထားသည့် ပင်လုံစိတ်ဓါတ် ခေါ်ခေတ်သစ်အမြင် တို့အကြားမတူညီ၊ ဆန့်ကျင်သည့် ကမ္ဘာ့အမြင် နှစ်ခု ၏ ပဋိပက္ခ ပင်ဖြစ်ပေသည်။ ရှေးခေတ် ဟောင်း ကမ္ဘာ့အမြင် သည် ရှည်ကြာစွာ ရှင်သန် ကြီးထွား နေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင် မင်းရူး၊ ဘုရင်ရူးများကြီးစိုးနေခဲ့ပြီး၊ တိုင်းပြည်သည်လည်း ခေတ်ရှေ့သို့မရွေ့နိုင်ပဲ ခေတ်နောက်ကျ ပြီးကျန်ရစ်ခဲ့ရသည်။ အများစုကြီးဖြစ်သော ဗမာပြည်သူတို့ကို စစ် အာဏာရှင် အဆက်ဆက် က “ဖက်ဒရယ်ခွဲ ထွက်ရေးမူ” ဖြင့်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် မှိုင်းတိုက်ထား နိုင်ခဲ့သည်က အကြောင်းရင်းတခုဖြစ်ပေသည်။ ယနေ့အချိန်အခါတွင် လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတို့အနေနှင့် ပင်လုံ ၏အမှန်တရားတို့ကို သဘောပေါက်မှုများ နေ့စဉ်နှင့် အမျှ တိုးပွား လာပြီဖြစ်သဖြင့် ပင်လုံခေတ်သစ်ကမ္ဘာ့အမြင် ဖြင့် အားကြိုးမာန်တက် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမည့် မြန်မာမျိုးဆက်သစ် ခေါင်းဆောင် ကောင်းများ ပေါ်ထွန်း ကာ ပင်လုံ ၏ ကျိန်စာ ကို တဇာတ် သိမ်းရန် အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။ စိတ္တဇ အိမ်မက်များကုန်ဆုံးလွန်မြောက် ၍ ပင်လုံ ၏ ကျိန်စာ အောက်မှ နောင်မျိုး ဆက်သစ် များလွတ်မြောက်ကြပါစေ။
၂၉ မေလ ၂ဝ၁၄။ The curse of Panglong
** ပင်လုံစာချုပ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် ဆွေးနွေးခန်းကို “ဒီမိုကရေစီအခြေခံတရားများ Vansangva Volume I စာမျက်နှာ ၁၁ရ” တွင် ဖတ်ရှု နိုင်ပါ သည်။ အွန်လိုင်းတွင် တော့ http://vansangva.com/vansangva-library/#1 တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သလို MP3 အသံဖိုင်ကို လည်းနား ဆင်နိုင်ပါသည်။
We are uploading again the re-edited version of the article
” The Curse of Panglong”. Sorry for the inconvenience caused.
– Vansangva Group –
« ပင်လုံပြည်ထောင်စု ကြီး ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်း နှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း
Legacies of Panglong »